Creative Space Design: ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်ခြင်း(Built Environment)
ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်ခြင်း(Built Environment)
ဗိသုကာဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ အိမ်များဟာ ကျနော်တို့ အားလုံးအပေါ်မှာ အင်မတန်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်...။ အဲလို
လွှမ်းမိုးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ခြင်း (Built Environment) ပင်ဖြစ်ပါတယ်...။
အဲဒီအကြောင်းကို အကျယ်မပြောခင်မှာ ကျနော်ပုံပြင်လေးနှစ်ပုဒ်ကို ရှေးဦးတင်ပြချင်ပါတယ်....။
ဗိသုကာအကြောင်းမပြောခင် ပုံပြင်လေးတွေ ပြောတော့ စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်...။ တချို့လည်းသိဖူး ကြားဖူး ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမယ်...။
ပထမပုံပြင်လေးက "The Three Bears" ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ...။
တခါတုန်းက ဂိုဒီလော့ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့...။ တနေ့မှာ သူတောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်း မကြာခင်မှာ အိမ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်...။ အဲဒီတော့ ဂိုဒီလော့လေးဟာ အသံပေးခေါ်ကြည့်၊ တံခါးခေါက်ကြည့်တာ ဘယ်သူမှမတွေရဘူး..။ ဒါနဲ့ အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်လေ...။
အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက စားပွဲပေါ်မှာ ဆန်ပြုတ်သုံးပန်းကန်ကိုတွေ့တာပေါ့...။ အဲဒီတော့ သူလည်းဆာဆာနှင့် စားမယ်ဆိုပြီး ပထမပန်းကန်လုံးကို မြည်းကြည့်လိုက်တယ်...။
“ အားလား...ပူလိုက်တာ” သူမအလန့်တကြားအော်လိုက်မိတယ်....။
နောက်တော့ ဒုတိယ ခွက်ကိုလှမ်းလိုက်တယ်....။
“ အာ... ဒီခွက်ကအေးစက်နေတာပဲ...”လို့သူမရေရွတ်ပြီး နောက်ဆုံးခွက်ကို ထပ်မြည်းလိုက်တော့တယ်...။
“အိုး... ဒါမျိုးမှ... ငါ့အကြိုက်ပဲ....” လို့ အော်ပြောလိုက်ပြီး ဝမ်းသာအားရ အကုန်သောက်ပစ်လိုက်တာပေါ့...။
အဲဒီလို ဝက်ဝံသုံးကောင်ရဲ့ မနက်စာကို စားပြီးသူမဗိုက်တင်းသွားတာနှင့် အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်...။ အိမ်ခန်းထဲကိုထပ်လျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်...။ ဧည့်ခန်းကိုရောက်တာနဲ့ ထိုင်ခုံသုံးလုံးကိုတွေ့ပါလေရော...။
ဒါနဲ့ ပထမထိုင်ခုံမှာ ခြေညောင်းလက်ဆန့်နားအုံးမယ်ဆိုပြီး ဝင်ထိုင်ပစ်လိုက်တာပေါ့...။
“ထိုင်ခုံကလည်း ကြီးလိုက်တာ...” ထိုင်ပြီးမှသူမအဆင်မပြေလို့ မြည်တွန်မိသွားပြန်တယ်...။
နောက်တစ်လုံးထိုင်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ ... “အားပါး..ဒါက ပိုတောင်ကြီးသေး ...”ဆိုပြီး စူးစူးဝါးဝါးအော်ပစ်လိုက်မိတယ်...။
“အလဲ့... ဒါလေးကမှ ငါ့အတွက်အကိုက်ပဲ...”တွေးပြီး အားပါးတရ ထိုင်ချပစ်လိုက်တယ်...။ဒါပေမယ့်သူမထိုင်ရုံ ရှိသေးတယ် ခုံလေးက တစ်စစီကျိုးပဲ့သွားတော့တာပါပဲ...။
အဲလိုဖြစ်သွားပြီး ဂိုးဒီလော့လေးအတော်ပင်ပန်းသွားရှာတယ်...။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူမခြေလှမ်းတွေက အပေါ်ထပ်ကို လှမ်းနေပီပေါ့...။ အပေါ်ထပ်က အိပ်ခန်းတွေရောက်တာနဲ့... ပထမဆုံး အိပ်ယာမှာ ဝင်အိပ်ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်..။ အဲဒီအိပ်ယာက အရမ်းမာနေတယ်...။ နောက်အိပ်ယာကို ဝင်ပြန်တော့လည်း အရမ်းနုညံ့နေပြန်ရော...။နောက်ဆုံး အိပ်ယာကိုတွေ့မှပဲ သူအကြိုက်အိပ်ယာဖြစ်တာနှင့် တခါတည်း ဝင်အိပ်နေလိုက်ပါလေရော...။
သူအဲလိုအိပ်ပျော်နေစဉ်မှာပဲ... အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဝက်ဝံသုံးကောင် ရောက်ချလာပါလေရော...။
ရောက်ရောက်ချင်းပဲ...ဖေဖေ ဝက်ဝံက ငါ့ဆန်ပြုတ်တစ်ယောက်ယောက်ယူသောက်လိုက်ပီ..
မေမေ ဝက်ဝံ ဆန်ပြုတ်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း....။
သားသားဝက်ဝံလေးကတော့ သူ့ဆံပြုတ်အကုန်သောက်သွားတယ်ဆိုပီး ညည်းတွားမိတာပေ့ာ...။
နောက် ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ ခုံတွေအကုန်ထိုင်ထားတာနှင့် ခုံတစ်လုံးကျိုးနေတာ တွေ့ပြန်ပါလေရော...။ ဒါနဲ့ အိမ်အပေါ်ထပ်ကို လိုက်ကြည့်ကြတော့ အိမ်ယာအကုန်လုံး ဖရိုဖရဲဖြစ်နေပြီး အိပ်ထားတာ တွေ့ရတော့တာပေါ့...။ နောက်ဆုံး သားသားဝတ်ဝံအိပ်ယာမှာ အိပ်နေတဲ့ ဂိုဒီလော့လေးကိုပါ တွေ့ပါလေရော...။
အဲဒီမှာ ဝက်ဝံသားသားလေးက “သားသား အိပ်ယာမှာ သူခိုး ဝင်အိပ်နေတယ်...”လို့အောင်ပြောလိုက်တာပေါ့...။
အဲဒီအချိန်မှာ ဂိုဒီလော့လေးလည်း အိပ်ယာက နိုးလို့ ဝက်ဝံသုံးကောင်ကိုလည်းတွေ့ရော ကြောက်လန့်ပြီး အိမ်ပြူတင်းက ခုန်ချပြီးပြေပါလေရောဗျာ....။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဂိုဒီလော့လေးတစ်ယောက် တောထဲကို ဘယ်တော့မှာ မသွားတော့ဘူးတဲ့...။
အဲဒါတွေပြီးမှ (Built Environment) အကြောင်းသွားတာပေါ့....။
နောက်ဒုတိယပုံပြင်ကလေးကတော့ "The three little pigs" ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပါ...။ ဒါလေးလည်း ကြားဖူးချင် ကြားဖူးနိုင်ပါတယ်...။ သိုသော်လည်း မကြားဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွကပေါ့ဗျာ....။
တခါတုန်းက ဝက်ကလေးသုံးကောင်ရှိသတဲ့...။ သူတို့သုံးကောင်ဟာ အချိန်တန်အရွယ်ရောက် ဝက်လားမြောက်လာတော့... ရေကြည်ရာ... မြက်နုရာ တိုးတတ်ကြီးပွားအောင် ရှာကြံဖို့ အိမ်ကနေထွက်ကြမယ်ပေါ့...။ အဲလိုထွက်ခါနီးမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ဝက်မကြီးက သားသုံးယောက်ကို ခရီးမထွက်ခင် သြဝါဒစကား မြွတ်ကြားသတဲ့....။ “သားတို့ရေ မင်းတို့တွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် ၊မင်းတို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါ...။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် မင်းတို့ကောင်းအောင်လုပ်ရင် လောကကြီးကလည်းမင်းတို့ကိုကောင်းကျိုးပြန်ပေးတတ်လို့ပဲကွ...” ဆိုပြီးမှာလိုက်ပါသတဲ့...။
အဲဒီလိုနဲ့ ဝက်လေးသုံးကောင်ထွက်လာခဲ့တာမှာ သူ့နေရာသူ ကိုယ်စီနေကြရင်း ပထမဆုံးဝက်ကလေးကတော့ သူနေထိုင်ဖို့နေရာကို ကောက်ရိုးတွေနှင့် ပြုလုပ်ထားသတဲ့...။ ဒုတိယ ဝက်ကလေးကတော့ သူနေဖို့ကို သစ်ချောင်းလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြန်သတဲ့....။
အဲ နောက်ဆုံးတတိယ ဝက်ကလေးကတော့ အုတ်တွေနှင့်သူ့နေရာကို အခိုင်အမာလုပ်ထားတာပေါ့...။
အဲဒီလို အသီးသီးနေကြတာ တနေ့မှာတော့ တောထဲက ဝံပုလွေတစ်ကောင်ဟာ အစာရှာထွက်လာရာမှာ ဝက်ကလေးတွေနေတဲ့နေရာရောက်တော့ ပထမဝက်ကလေး နေတဲ့ကောက်ရိုးတဲကိုတွေ့ပါလေရော...။ အဲဒီမှာ ဝက်ငယ်လေးတစ်ကောင်တည်းနေတာ သိတော့ စားဖို့အကြံနဲ့ “ ငါ့ကို အထဲကို ဝင်ခွင့်ပေးပါ... မပေးရင်မင့်တဲကို ဖြိုပြီး ငါဝင်လာမယ်...။” လို့ခြိမ်းခြောက်ပြီးပြောတယ်...။
အဲဒီမှာ ဝက်ကလေးက... အပြင်က ဝံပုလွေကိုကြည့်ပြီး “ငါနှင့်အသွေးအမွှေးမတူ မင်းလိုလူ ဝင်ခွင့်မပြုလို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့...။ ”
ဝံပုလွေက စိတ်ဆိုးပြီး ကောက်ရိုးအိမ်ကိုဖြိုဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်...။ ပြီးတော့... ဝက်ကလေးကို စားပစ်လိုက်တယ်...။
နောက်တစ်ရက်မှာလည်း အဲဒီဝံပလွေဟာ ဒုတိယ ဝက်ကလေးတွေနေတဲ့နေရာရောက်လာပြန်တယ်....။ အဲဒီမှာ ဝက်ငယ်လေးတစ်ကောင်တည်းနေတာ သိတော့ စားဖို့အကြံနဲ့ “ ငါ့ကို အထဲကို ဝင်ခွင့်ပေးပါ... မပေးရင်မင့်တဲကို ဖြိုပြီး ငါဝင်လာမယ်...။” လို့ခြိမ်းခြောက်ပြီးပြောပြန်တယ်...။
အဲဒီမှာ ဝက်ကလေးက... အပြင်က ဝံပလွေကိုကြည့်ပြီး “ငါနှင့်အသွေးအမွှေးမတူ မင်းလိုလူ ဝင်ခွင့်မပြုလို့...” ပြန်ပြောလိုက်ပြန်တာပေါ့...။
အဲဒီမှာ ဝံပုလွေက အရင်လိုပဲစိတ်ဆိုးပြီး သစ်ချောင်းအိမ်ကိုဖြိုဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်..။ နောက်တော့ ဝက်ကလေးကို စားပစ်လိုက်တယ်...။
နောက်တစ်ရက်မှာလည်း တတိယ ဝက်ကလေးရဲ့ အိမ်ကိုလာပြန်တယ်..။ အရင်လိုပြောပြီး ဖြိုဖို့လုပ်တော့တာပေါ့...။ ဒါပေမယ့် တတိယဝက်ကလေးက အခိုင်အခံဆောက်ထားတော့ ဝံပလွေ ဖြိုလို့မရနိုင်ခဲ့ဘူး...။ နောက်ဆုံးဝံပုလွေကြီး အကြံထပ်ထုတ်တယ်..။ အိမ်ကိုဖြိုမရတော့ ဘေးမှာရှိတဲ့ နေရာကို ရှာကြံပြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တတ်ဖို့ ကြံစည်တာပေ့ာ....။
အဲဒီလိုနဲ့ အိမ်ခေါင်ပေါ်ရောက်အောင်တွယ်တတလာပြီး အထဲ ဝင်ဖို့ အပေါက်ရှာရာ မှာ မီးခိုးခေါင်းတိုင်တွေ့တာ နှင့်အဲဒီထဲကနေ အောက်ကို ဆင်းလိုက်တယ်...။ ဝံပုလွေအဲလိုလုပ်နေတာတွေကို အထဲက ဝက်ကလေးက ဂရုတစို်က်နေတော့ သိနေတာပေါ့..။ အဲဒီတော့ မီးခိုးခေါင်းတိုင်ထဲ ဝင်တာနဲ့ မီးဖိုထဲ မီးဇာထဲပြီး မီးရှို့ပစ်လိုက်တာ ဝံပုလွေလည်း အကင်ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့...။
အဲနောက်နေ့မှာ အဲဒီဝက်ငယ်လေးဟာ မိခင်ကိုအိမ်အလည်ခေါ်ပြီး ဝံပုလွေ အကြောင်းပြောတာပေါ့...။ အဲဒီမှာ မိခင် ဝက်မကြီးက .. ကဲ အမေမပြောလားသာရေ... လောကမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့သူကို လောကကြီးက ကောင်ကျိုးပြန်ပြုပါတယ်ဆိုတာ... ခုလက်တွေ့မဟုတ်လားသားရဲ့...။ဆုံးမစကားပြောသတဲ့...။
ဒီလိုနဲ့ ဝက်ကလေးလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဝက်သတ်သမားလက်မရောက်ခင်အထိနေထိုင်သွားသတဲ့ကွယ်....။ ပုံပြင်ကလေးတွေကတော့ ဒါပါပဲ...။ ဘာသာပြန်ပုံပြင်လေးတွေပါ...။ မူရင်းတွေဖတ်ချင်ယင်တော့ အွန်လိုင်းမှာ ရှာကြည့်ကြပါ..။ မချောမွေ့ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိပ္ပါယ်လွဲရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော့ရဲ့ ညံဖျင်းမှုကြောင့်ပါခင်ဗျာ...။။
ပုံပြင်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုသေခြာဖတ်ဖြစ်ကြပါသလား...။ ပုံပြင်လေးတွေမှာ ဗိသုကာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဘာထူးခြားတာတွေ ပါလာသလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိကြပါသလား...။ ပထမပုံပြင် ဝက်ဝံသုံးကောင်ကို ဗိသုကာတစ်ယောက် အနေနဲ့ မြင်ကြည့်ရင် ပုံပြင်ထဲမှာ တံခါးတွေ၊ ပြူတင်းတွေ ပရိဘောဂတွေ အစုံပါလာပါတယ်...။ အိမ်တစ်လုံးအတွက်ရှိသင့်တဲ့ အချက်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပါလာတယ်...။ နောက် ဝက်ကလေးသုံးကောင် ပုံပြင်မှာတော့ အာခီဗျူးအနေနဲ့ ဘာမှမှတ်သားဖွယ်မတွေ့ရဘူးဗျ...။ သူ့ရဲ့ အဓိကပေးချင်တာက အာခီအမြင်ထက် ဝက်ကလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့် အလုပ်အကိုင်ကို အဓိကဖော်ပြချင်တာမျိုးပါ...။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကျင့်ဆိုင်ရာ အတုယူလေ့လာဖို့သာ အဓိကထားတာပါ့....။ အဲဒီတော့ ဗိသုကာပိုင်းဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှုဘာမှမပါတဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ခုပေ့ာ...။
အဲဒီပုံပြင်နှစ်ပုဒ်ကနေ ကျနော်တို့ လူသားတွေအတွက် အဓိကအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ထုတ်နှုတ်နိုင်ပါတယ်...။
၁ ။ အစားသောက် (စားရေး)
၂ ။ ခိုအောင်းနေထိုင်ရာ (နေရေး)
၃။ အဝတ်အထည် (ဝတ်ရေး)
၄။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု (လုံခြုံရေး) စတာတွေဟာ အဓိက အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...။
အဲဒီအခြေခံ အချက်တွေကိုမှ အလှဆင်မှုဘက်ကနေ အစားအစာတွေ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပြသခြင်းများ၊ စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်းများ၊ နေထိုင်စရာများကိုလည်း အမျိုးမျိုးလှပအောင်ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ ကာကွယ်ရေး လက်နက်ကိရိယာများကိုလည်း(ဥပမာ... ဆောင်ဓားများ) အလှချိပ်ခြင်း၊ ကိုင်ဆောင်ခြင်းများကို ကျနော်တို့လူသားတွေ လုပ်ဆောင်တတ်ကြပြန်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်တတ်ကြတာကို သတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်...။ အဲဒီတော့ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလို အနုပညာဆန်စွာ ပြုလုပ်ဖန်တီးတတ်ခြင်းများဟာ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြီးရင် နောက်ကလိုက်လာတဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရမှာပါ....။ ဥပမာ အားဖြင့် အဝတ်အစားဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့တွေ ကောင်းကောင်း အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းဖန်တီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်..။ အဲလိုလုပ်လို့ရနိုင်ခြင်းဟာ ဗိသုကာပညာပါပဲ...တနည်းပြောရာ ရင် အာခီတတ်ချာပဲပေါ့နော်...။ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို လူတွေနှင့် အဆင်ပြေအောင် ပိုမိုလှပအောင် အသုံးဝင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဖန်တီးမှုတွေကို အာခီတတ်ချာ လို့ဆိုနိုင်မယ်...။ အခြားနေရာများ ဥပမာတွေ ခြောက်ကမ်းပါးကြီးတွေ မြစ်ကြီးတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ထိုးထားတဲ့ တံတားကြီးတွေမှာ ဗိသုကာဖန်တီးမှုပညာတွေ...။ ပန်းခြံကြီးတွေမှာ ဖန်တီးမှုတွေ...။ မြို့ကြီးတွေတည်ဆောက်ရာမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မြို့ကွက်ဖော်ဆောင်မှုတွေဟာ အထူးအရေးပါတဲ့ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်ထားခြင်းတွေပါပဲ...။
Build enviironment နှင့်ပတ်သတ်ပြီး Elementry စာအုပ်ရဲ့ မိတ်ဆက်မှာ ရေးထားတဲ့ မူရင်းစာလေးတွေ ကျနော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်...။ ဖတ်ရှုပြီး ပိုမိုနားလည်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်...
"One of the basic maturities of education is " enviromental". The root words of environment declare it to mean the sum total of influences which modify and determine the developement of life or character. In all of the earth's history, no culture_ no time _ has been more in need , been more concerened with environment. We want to preserve rare species, to have clean air and pure water, to enjoy rich forests and wilderness areas. The build environment is one of the major environmental concerns of the twentieth and twenty-first centuries.
Build environment ကို အဓိက ထိခိုက်စေတာကတော့ သမိုင်းဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းမှု နှင့် အလှအပဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မှုတွေပါပဲ...။ historical နှင့် aesthetic လို့ ဆိုထားပါတယ်...။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကြီးကျယ်ထင်ရှားပြီး အင်မတန် ကောင်းမွန်လှတဲ့ အဖိုးတန်ရှားပါး အဆောက်အအုံအတော်များများကို ကျနော်တို့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်...။ အဲဒီအခါမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ Build environment ကိုထိခိုက်နိုင်စေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျနော်တို့တွေရဲ့ မျိုးဆက်တိုင်းမှာ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတတ်အောင်ထိန်းသိမ်းရင်း အနာဂတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်ရှိနေပါတယ်...။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ကျနော်တို့တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း Build environment ကို အချက်နှစ်ချက်နှင့် အဓိကထားစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်...။ ပထမအချက်က မူလအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ပါ...။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကိုလည်း လှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပါပဲ....။ အဲဒီအချက် နှစ်ချက်ဟာ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ အထူးအရေးထား ထိန်းသိမ်းရမယ့် အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်...။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တွေရဲ့ ဗိသုကာဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်တွေကို တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေအောင် အထူးဂရုပြုသင့်လို့ပါပဲ ခင်ဗျား...။
အင်း ကျနော်ခုပြောတဲ့ အချက်တွေမှာ Build environment ကိုကောင်းကောင်းနားလည် နိုင်လောက်မှာပါ...။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး Build environment နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သတိထား လေ့လာမှုလေးတွေ လုပ်နိုင်အောင် အတွေးလေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်....။
ကျနော်တို့တွေ ကြားဖူးတဲ့ ဖတ်ဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေ ဝတ္ထုလေးတွေမှာ အဆောင်အအုံဆိုင်ရာ အသိအမြင်တွေ ပါလာတတ်ပါတယ် ...။ အဲဒါလေးတွေကို ဂရုပြုမှတ်သားစေချင်ပါတယ်...။ ဥပမာ ... ( Hansel and Gretel, Snow white, Cinderella, Rapunzel အစရှိတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေပေါ့)...
ကျနော်တို့ မြန်မာဆိုရင်ရော ငယ်စဉ်ကကြားဖူးတဲ့ ကလေးကဗျာလေးတွေမှာ အဲလိုအကြောင်းလေးတွေပါတာလေးတွေရှိပါတယ်....။
ဝါးတစ်လုံးနှင့် ဆောက်တဲ့ အိမ်
ကိုကိုကြီးတို့ အိမ်...။ စသဖြင့်ပေါ့လေ...။
နောက် ဦးပုညရေးထားတဲ့ လေးမောင့်စံကျောင်းကဗျာလေးဆိုရင်ရော...
“မုလေးရုံ တော အစ၊ ဒေါနလမ်းမြေညီ
နံသာဖြူ လေးမောင့်စံကျောင်း” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး အကုန်တော့ မရတော့ဘူး...။ အဲဒီထဲမှာရော ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မြေခင်းအလှအကြောင်းလေးတွေ သရုပ်ဖော်ထားသလို စဉ်းစားစရာလေးတွေပေ့ာ...။
အင်း ကျနော်တို့တွေ Build environment အကြောင်းပြောရင်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို လေ့လာ စူးစမ်း ပြီး .... ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရွာရဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အိမ်ယာ အဆေက်အအုံတွေရဲ့ တည်ဆောက်ထားမှုတွေ...။ နောက် အဲဒီမှာ တည်ဆောက်ထားမှုတွေမှာ ဘာတွေ ပြုပြင်သင့်သလဲ..။ ဘာတွေကောင်းမွန်သလဲ... ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင် လှပသွားမလဲ... ဘာတွေလုပ်လိုက်ရင် ဖြင့် လူတွေ နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မလဲဆိုတာတွေ... တွေးတောကြံစည်စဉ်းစားရင်း တောတောင် ရေမြေတွေရဲ့ သဘာဝတွေ၊ အားလုံးကို ခြုံငုံလေ့လာမယ် ဆိုရင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးသော Build environment ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိကြောင်း...။
Posted by CreativeDesign at 10:10 PM